३० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको जनरल इन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्था
भदौ ३०, काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले ३० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हालै अनुमति पाएको छ ।
आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि उक्त कम्पनीले बार्डबाट गत भदौ २५ गते अनुमति पाएको हो । विक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
गत आवको चौथो त्रैमासमा कम्पनीको नाफा ३९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीले सो अवधिमा रू. ५ करोड ६ लाख नाफा कमाएको हो । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३ करोड ६२ लाख नाफा कमाएको थियो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजि रू. ७० करोड रहेको छ ।
३० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँट गर्दा कम्पनीको चुक्तापूँजि रू. १ अर्ब पुग्नेछ । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११४ दशमलव ६८ रहेको छ । गत आवको चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. ४ करोड ६६ लाख सञ्चित गरेको छ । सोही अवधिमा सम्ममा कम्पनीको बीमा कोषमा रू. ५ करोड १० लाख जम्मा भएको छ ।
उक्त कोषमा अघिल्लो आवको चौथो त्रैमाससम्ममा रू. २ करोड ८६ लाख थियो । कम्पनीले गत आवको चौथो त्रैमाससम्ममा रू. ५३ करोड ६९ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।
अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा बीमाशुल्क ६१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३३ करोड २५ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । गत आवको चौथो त्रैमाससम्ममा उक्त कम्पनीले १ हजार ५६५ जनालाई रू. १९ करोड ५२ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ भने ३५६ जनालाई रू. ३ करोड ९० लाख दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ७ दशमलव २३ रहेको छ ।
सिमाना बन्दले जुराएको अवसर[२०७७ असोज, १२]
राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रभावकारिता बढेको दाबी[२०७७ असोज, १२]
अग्रवालमाथि अनुसन्धान गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग[२०७७ असोज, १२]
निशानको धमाकेदार दसैं–तिहार तथा छठ अफर[२०७७ असोज, १२]